💙 Happy Birthday Myanmar 💙
လူကြီးမင်းတို့၏ ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ မိဘဆွေမျိုးများဆီသို့ မွေးနေ့လက်ဆောင်များ ပို့ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ BDS က ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ.
💙 မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ဓါတ်ပုံများဖြင့် ပြုလုပ်လို့ ရသော ခွက်လေးများ
💙 စာသား Towel များ
💙 စာသား T-Shirt များ
💙 Indoor Tree များ
🎁 လက်ဆောင်ပစ္စည်းမျာကို ရန်ကုန်မြို့တွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
🎁 နယ်မြို့များသို့ (ကိတ်နှင့် ပန်းစည်းမရရှိနိုင်သေးပါ၊ တစ်ခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများသာ) ကားဂိတ်မှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။
🎁 ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးရာတွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအတွင်းအရောက်ပို့ပေးနေပါသည်။
🎀 BDS သို့ ဖုန်းဖြင့် Order မှာယူနိုင်ပါသည်။
🎀 Facebook Message မှလည်း မှာယူနိုင်ပါသည်။
🎀 BDS Website မှတစ်ဆင့် Order Form ဖြည့်သွင်းပြီး မှာယူနိုင်ပါသည်။
🎀 BDS ရုံးခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ မှာယူနိုင်ပါသည်။
💟 ရုံးခန်းသို့ လာရောက်၍ ငွေပေးချေခြင်း
💟 ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေခြင်း ( AYA Bank, KBZ Bank, CB Bank, AGD Bank)
💟 Western Union များမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေခြင်း (ပြည်ပမှ မှာယူသူများအတွက်)
⏰ ကျွန်တော်တို့မှ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကို နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေပါသည်။
⏰ Website မှ Order များကိုလည်း ရုံးချိန်အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေပါသည်။
⏰ အမှာလက်ခံမှုကို တနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်ပါသည်။ (Delivery မပိတ်ပါ)
BDS ( We deliver happiness )
Phone - 0943163303. 09975550181.
Website - www.bds.com.mm
Address - 31(i), မဟာမြိုင်လမ်း၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်။